ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဘရီဗစ် ကားများ | တိုယိုတာဘရီဗစ် ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Silver Toyota Brevis 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Toyota Brevis 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Toyota Brevis 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: P...
Pearl White Toyota Brevis 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Brown Toyota Brevis 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Toyota Brevis 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
Brown Toyota Brevis 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အ...
Lks 119 ညှိနှိုင်း
Pearl gold Toyota Brevis 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
White Toyota Brevis 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger.ြ...
Pearl White Toyota Brevis 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...
Pearl white Toyota Brevis 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airba...
silver Toyota Brevis 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...
Pearl white Toyota Brevis 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Dr...
Red Toyota Brevis 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Air...
တိုယိုတာက ဌင်းရဲ့ ကား မော်ဒယ်တော်တော်များများကို အမျိုးအစားကွဲပြီး ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဇိမ်ခံ အမျိုးအစားကို လပ်ဆပ်ကားဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကနေ ထုတ်တာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့သိရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း နောက်ပိုင်းမှာ သီးသန့်အနေနဲ့ ခွဲထွက်သွားတာလို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တိုယိုတာရဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ တစ်ခြား ဇိမ်ခံကားတွေ မရှိဘူးလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တိုယိုတာ ခရောင်း၊ တိုယိုတာဘရီဗစ်တို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ခရောင်းကတော့ ဌင်းရဲ့ ကားမော်ဒယ် အမျိုးအစားထဲမှာ တစ်သီးတစ်ခြားအနေနဲ့ ဆန်းသစ်လှပစွာ တည်ရှိနေတာကို တွေ့ရမှာ ပါ။ အင်ဂျင်က ပုံမှန် ၁၃၀၀ စီစီတွေထက်ကြီးပေမဲ့လည်း လူတွေကတော့ စီးနေကြတာပါပဲ။ အကြောင်းကတော့ တိုယိုတာ ခရောင့်တွေကို ပုံမှန်လူတန်းစားတွေ စီးနိင်အောင်လို့ ဈေးကို သင့်လျော်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ ဘရန်မော်ဒယ် တစ်ခု ဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ခရောင်းဟာ အရင် ဂျပန် တော်ဝင်မိသားစုတွေ စီးနင်းတဲ့ ခရောင့်ကားတွေကို ပုံစံတူညီစေပြီးတန်းဖိုး လျော့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ခရောင့်တွေကို အခုလို ညွှန်းနေရခြင်းက တိုယိုတာ ဘရီဗစ်ဟာ ခရောင့်ရဲ့ အတွင်းဖက် အစိတ်အပိုင်းနဲ့ အဆင်တွေ တော်တော်များများ ဆင်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခု ရှိတာက တိုယိုတာ ခရောင့်တွေက ယနေ့တိုင် ထုတ်နေတဲ့ ကားမော်ဒယ် တစ်ခု ဖြစ်ပေမဲ့လို့ တိုယိုတာ ဘရီဗစ်တွေကတော့ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၇ ထိကိုသာ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ တိုယိုတာ ခရောင့်တွေက အမျိုးအစားစုံတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ တိုယိုတာ ခရောင့် အမည်းရောင်တွေကိုတော့ အများအားဖြင့်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ဘ၇ီဗစ်တွေကတော့ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၇ ထိကိုသာ ထုတ်တဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၀၀ မော်ဒယ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါး လေးပေါက် ဆီဒန်ပုံစံ တိုယိုတာ ဘရီဗစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဌင်း တိုယိုတာ ဘရီဗစ်ရဲ့ အင်ဂျင်တွေကို တိုယိုတာ ခရောင့်လိုပဲ ၂၅၀၀ စီစီကန စပြီး တပ်ဆင်ထားပြီး ၃၀၀၀ စီစီ ထိကို တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကားမော်ဒယ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။၂၅၀၀ စီစီကတော့ မြင်းကောင်ရေ ၂၀၀ လောက်ကို ထုတ်ပြီး ၃၀၀၀ စီစီကတော့ ၁၆၄ ကီလိုဝပ်နဲ့ မြင်းကောင်ရေ ၂၂၀ လောက်ကို ထုတ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် နှစ်မျိုးလုံးကို တိုယိုတာရဲ့ နာမည်ကြီး ဗီဗီတီအိုင် နဲ့ ဒီ-၄ တိုက်ရိုက်အင်ဂျပ်ရှင်းကို တပ်ထားပါတယ်။ ဂီယာမှာလည်း နှစ်မျိုးလာပါတယ်။ ပထမ တစ်မျိုးကတော့ နှစ်ဘီးမောင်းမှာ ဂီယာ ငါးချက်ထိုး အော်တိုကို တပ်ဆင်ပြီး လေးဘီးမောင်းစနစ်တွေမှာတော့ အော်တို ဂီယာ ၄ ချက်ထိုးကို တပ်ဆင်ပါတယ်။ လေးဘီးမောင်းစနစ်ပါတဲ့ မော်ဒယ်တွေကတော့ ၂၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေမှာသာ ရရှိပါတယ်။ အကုန်လုံးသော မော်ဒယ်တွေမှာ ယာဉ် တည်ငြိမ်မှု ကွန်ထရိုး၊ အော်တို ဘရိတ်စနစ်၊ အဆင့်မြင့် မီးသီးစနစ်တွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ဘရီဗစ်တွေကို ၂၀၀၄ လောက်မှာ ရှေ့က ကားဘော်နက် သံဇကာတွေ ပြောင်းပါတယ်။ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၇ ထိကို ထုတ်လုပ်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ အနည်းငယ်ရိုးရှင်းပါတယ်။ မီးလုံး၊ အရှေ့ဘောနက် ၊ နောက်မီးသီးစတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ အနည်းငယ် ပုံမှန် မော်ဒယ်သစ်တွေနဲ့စာလျှင် ရိုးရှင်းနေပါတယ်။ အတွင်းဖက်မှာတော့ ဒီဇိုင်း မြင့်မားပါတယ်။ တိုယိုတာ ခရောင့်လိုပဲ တူညီပြီး ဆင်သယောင်ရှိနေပါတယ်။ တီဗီ၊ ကားတံခါး လက်ကိုင်က စပီကား စတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ ငါးယောက်စီးနိုင်တဲ့ တိုယိုတာ ဘရီဗစ်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ တိုယိုတာ ဘရီဗစ်တွေကို ဒီဇိုင်းတိုးမြင့်ထားမှုမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ၂၀၀၇ မော်ဒယ်တွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြည်တွင်း အခွန်နဲ့ စာလျှင်တော့ အနည်းငယ် ၀ယ်ယူရမှာ အခက်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ကားတွေ စစသွင်းလို့ ရလာခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ တိုယိုတာ ဘရီဗစ်တွေဟာ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး ပြည်တွင်းမှာ လူစီးများလာခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ရရှိနိုင်မှု နဲ့ ဈေးနှုန်း
တိုယိုတာ ဘရန်ကားများဟာ ပြည်တွင်းမှာ ကျော်ကြားတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်သည်နည်းတူစွာ စပေါ့စ်ကား သီးသန့်ရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ အခြား ကားကြီးရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက လွဲရင် ကုမ္ပဏီနဲ့ လေလံတော်တော်များများနဲ့ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာရဲ့ အရောင်းပြခန်းတွေကနေလည်း တစ်ဆင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေကိုရော အသစ်ကားတွေကိုရော ရရှိနိုင်ပြီး အခြားအခြားသော ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး စခန်းတွေကလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ၀ယ်ယူမယ်ဆိုရင် ၂၀၀၂ ကို ၁၃၅ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၀၁ ကို ၁၇၀ သိန်း၊ နဲ့ ကျပ်သိန်း ၁၅၀ လောက်ထိ ဈေးပေါက်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင် မှာ ၂၅၀၀ စီစီကစထားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး အော်တို ဂီယာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ မော်ဒယ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ မော်ဒယ် အနည်းငယ် နိမ့်မှုကြောင့် ပုံစံဒီဇိုင်းက ရိုးရှင်းနေပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေ ကားရဲ့ သံဇကာတွေကအစ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းများ အနေနဲ့ ပါဝါလော့ခ်၊ပါဝါ စတီယာရင်၊ တီဗီ၊ လေအိတ်၊ ပါဝါ ၀င်းဒိုးတွေပါ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းကို နှစ်သက်ပြီး ဈေးနှုန်း သက်သက်သာသာ ၀ယ်ယူ စီးနင်းလို့သူများ အတွက် တိုယိုတာ ဘရီဗစ်က အသင့်ရှိနေပါတယ်။ လောလောဆယ် ပြည်ပက နေမှယူမှုကတော့ စလစ် ကပ်ရတာနဲ့တင် တန်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းက ရှိပြီးပြီး တစ်ပတ်ရစ်တွေကို ၀ယ်ယူခြင်းကလည်း တစ်မျိူးကောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။